Unyanzvi hwako hwokugadzirisa hutano hunokosha munguva yehupenyu hwako, asi hunogonawo kuva hwakaoma.
Nzira yekusimbisa uye kutamira kune chinangwa chinogara chiine chikamu chisingazikamwi.
Mumwe anogona kukurumidza kugumburwa nemanzwiro okusachengeteka paanotarisana nekuita zvisarudzo.
Iwe unoda kudzidzisazve, asi uri kuenda nekupfuura here? Iwe une chirevo chitsva, asi unoziva sei kana huswa hwakasvibira kumwe kunhu? Kana ndikati hongu uye ini ndakanganisa? Nekudaro, isu tinodzidza zvese zvinoitika, isu tinoedza kutsanangura zvakanakira nezvayakaipira, pakupedzisira chikamu ichi chisingazivikanwe chinokura nekukurumidza senge huwandu hwezviitiko.
Nzira yekuita sei chisarudzo chakanaka? Ndingabvumirana sei nesarudzo ndisingazivi chinangwa? Uye pakupedzisira, hazvingavi kuchenjera here kuita chinhu?
Iyi vhidhiyo ichakudzidzisa chinhu chakakosha kuti utungamirire hupenyu hwako: kukwanisa kuziva zvisarudzo zvako!
Usaramba uine mitezo, tora simba rehupenyu hwako, sarudzo ichava shamwari yako yakanakisisa.
Muvhidhiyo iyi uchawana mazano uye mhinduro dzinokubvumira kuita zvisarudzo nyore nyore, nekunyarara kwakawanda ..., uye zvose izvo, mune zvishoma 5 points:
1) Zvasarudzwa : iyo inowanikwa kwauri, kune vakawanda vavo kunyange kana iwe uchifanira kusarudza paunenge uchiita chisarudzo!
2) Ichine simba : balance intuition uye rationality!
3) Mufaro : chikuru chinotyisa ... chisarudzo ichi chichaita kuti ndifare?
VERENGA Kubudirira pashure pekukundikana
4) Mutsa : kuteerera kune avo vanokupoteredza kunogona kuita zvishamiso pane zvaunosarudza.
5) Yako Akakosha Energy : Funga nezvemuviri wako uye manzwiro ako pamusoro pezvisarudzo izvi.
Iye zvino sezvo iwe une kiyi yekushanda pane zvaunosarudza, tinoitei?
Chisarudzo Kuita-Maitiro Aungaita Sei Sarudzo Yakarurama? May 11th, 2018Tranquillus
pashureTop Top Resources Kuti Udzidze Chirungu
zvinoteveraNzira Yakanakisisa Yokushandisa Mazano Okudzidza ChiSpanish
Nzira yekuve yakangwara mumamiriro ezvinhu ose?